ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): August 2007
မမ s-potato က (၁၁)မီးငြိမ်းအောင် tag လုပ်လိုက်တာမို့ စဉ်းစားခန်းလေး ဖွင့်ပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်ရပြန်တယ် .. ။ ခေါင်းစဉ်က အကြိုက်ဆုံးပို့စ် ၅ ခုတဲ့ .. ။ အမှန်အတိုင်းပြော၇ရင်တော့ ကိုယ်ရေးထားတာမို့ အကြိုက်ဆုံးရယ်တော့ မရှိပါဘူး .. ။ ခံစားချက်အစစ်အမှန်နဲ့ ပေါက်ကွဲထွက်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကိုတော့ နည်းနည်းပိုသဘောကျတာပေါ့နော် … ။
၅) နောက်ဆုံးပို့စ်ကတော့ Double Taxation Avoidance 2
ကျွန်မအပါအ၀င် စင်္ကာပူရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မတရားခံစားနေရတဲ့ အခွန်နဲ့ ရင်ထဲက စကားသံအချို့ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ပို့စ်ပါ .. ။
ဒီလက်ရွေးစင်၅ခုပါပဲ .. ။ ကိုးန၀င်းကျေအောင် ထပ်ပြီး Tag လုပ်ခံရမယ့် မိတ်ဆွေဦးတွေက
၉) ကိုမျက်လုံး တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ………………. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:46 AM 1 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:43 AM3comments Links to this post
ဒီနေ့အထိ (ငါ) တည်ရှိနေခဲ့တာပါ .. ။
ငါကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ဖူးပါတယ် .. ။
ငါဦးထိပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ .. ။
ငါမရင့်ကျက်နိုင်သေးတာ .. ။
တကယ်ဆို .. ငါက
မြက်ရိုင်းကြားက ပန်းတစ်ပွင့်ပါ ..။
ရင်တစ်ခုလုံး နာချင်လာတယ် .. ။
မဟုတ်မခံ မာနဆူးတွေတော့ ကိန်းဝပ်နေတယ် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:50 AM3comments Links to this post
စနေနေ့မနက် လမ်းလျှောက်ပွဲအတွက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက လက်ခံရရှိတဲ့သတင်းတစ်ခုကို အားလုံးကို ဖြန့်ပေးလိုက်ခဲ့တယ်။ သတင်းဆိုတာ တကယ်မှန်ကန်ရင် လက်ဆင့်ကမ်းတတ်ကြတာ ဒါအမြဲပါပဲ .. ။ ဒါ မထူးဆန်းပါဘူး .. ။ ဒီလမ်းလျှောက်ပွဲမှာ ခေါင်းဆောင်မရှိဘူး .. ။ ငယ်သားမရှိဘူး . ။ စိတ်ပါဝင်စားသူ လိုက်ခဲ့ကြပါဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ်ကြတယ်. .။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် .. ။ မနက်ခင်းတစ်ပွဲ ညနေခင်းတစ်ပွဲမှာ ညနေခင်းအတွက် သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သွားနေချိန်မှာ ကျွန်မ လမ်းပေါ်ရောက်ပြီး လမ်းတစ်ဝက်မှ ပါစင်နယ်အကြောင်းတစ်ခု ပေါ်လာတယ် . ။ အဲဒီအတွက် အဖြူရောင်ကြီးဝတ်ပြီး အော့ချပ်ပေါ်တော့ မရောက်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မကိစ္စတွေနဲ့ တစ်နေကုန် အလုပ်ရှု့ပ်သွားခဲ့တယ် … ။ အဲဒီအတွက် ရလဒ်တွေက ဘာလဲ
အချို့က မေးလ်နဲ့ဆဲတယ် .. ။ အချို့က ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြောတယ် .. ။ အချို့က ဘလော့ခ်မှာ အော်တယ် … ။ အဲဒီလူတွေကို မေးချင်တယ် .. ။ သတ္တိဆိုတာဘာလဲ … ။ ဘာကို သတ္တိလုိ့ခေါ်တာလဲ … ။ လူ့ဘ၀မှာ အကြောင်းကိစ္စတွေ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြတယ် .. ။ အဓိကက မိမိရဲ့စေတနာ သန့်စင်မွန်မြတ်ဖို့ပဲ .. ။ စနေမနက်မှာ ကျွန်မနဲ့အတူလျှောက်ဖို့ ချိန်းထားတဲ့ လူတွေ ကျွန်မစိတ်ဓါတ်ကိုသိတယ် . .။ အားတက်သရော ကျွန်မလုပ်နေတာတွေကို အကြောင်းစုံသိတဲ့ ကျွန်မကိုချစ်သူတွေ နားလည်တယ် . ။ အစပိုင်းက ကျွန်မ တအားခံစားသွားရတယ် .. ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကို တိုက်ခိုက်သူတွေကို ကျွန်မ ရန်ပြန်မဖြစ်ချင်ပါဘူး .. ။
“မိမိလုပ်ပြီး သူများက အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ပျက်ကွက်ခဲ့တာနဲ့ နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောကြေးလား”။
မကျေနပ်ရင် face to face လာပြောလို့ရတယ် . .။ ကျွန်မက သူများလို မပုန်းတတ်ဘူး .. ။ ကျွန်မ ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲ နအဖ လက်ပါးစေတွေကအစ ဒီမိုကရေစီအရေး စိတ်ပါဝင်စားသူတွေအဆုံး သိကြတယ်။ ကျွန်မဘယ်သူဘယ်ဝါလဲ မလျိုထားဘူး .. ။
ကျွန်မ ဘလော့ခ်ရေးနေတာ ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စေတနာအပြည့်နဲ့ တတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ပါဝင်နေတာ လူတွေ လေးစားဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး .. ။ အပေါင်းအသင်း ပိုဝင်ဆံ့အောင်လည်း မဟုတ်ဘူး .. ။ လင်းလက်ကြယ်စင်ဆိုတာ ဖြစ်လာဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး . .။ ဒါတွေက ကျွန်မ ဘ၀မှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာတွေ မဟုတ်ဘူး ။ ကျွန်မ စိတ်ထဲယုံကြည်ရာကို တစ်ယောက်တည်း လိပ်ပြာသန့်သန့် စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လှမ်းနေတာပဲ ရှိတယ် .. ။ အဲဒီအတွက် ဘယ်သူပဲ အကောင်းပဲပြောပြော အဆိုးပဲပြောပြော ကျွန်မ ဘာမှမဖြစ်သွားဘူး .. ။ လူတွေ ကျေနပ်တာ မကျေနပ်တာ ကျွန်မ ဂရုမစိုက်ဘူး။ မိမိလိပ်ပြာမိမိလုံဖို့ ၊ မိမိစေတနာက မွန်မြတ်သန့်စင်နေဖို့ပဲ ကျွန်မ အဓိက ဦးတည်ထားတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ၊ သူတစ်ပါးတွေ အကောင်းမြင်ဖို့ ကျွန်မ လူဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို အတ္တကင်းကင်းနဲ့ စေတနာအပြည့်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပဲ ကျွန်မ လူဖြစ်လာတာ။ တစ်ယောက်တည်းပဲ စေတနာအပြည့်နဲ့ ယုံကြည်ရာကို လှမ်းရဲတဲ့ သတ္တိအပြည့်မွေးထားပါတယ် ။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် ကျွန်မ ဘယ်သူလဲ ဘယ်သူမှတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။
စိတ်ပါဝင်စားသူပါဝင်ဖို့ လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းပေးလိုက်တာပဲရှိတယ် … ။ ဒီကိစ္စကို စတင်ဦးဆောင်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကျွန်မ နားလည်လို့ စတင်အကြံရသူဘယ်သူဘယ်ဝါတွေလဲ ကျွန်မ မဖော်ထုတ်တာပဲ ရှိတယ်။ သူများရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို ကျွန်မနားလည်တယ် .. ။ မလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေ ကျွန်မ စကားမများချင်ဘူး။
တစ်ခုပဲ ကျွန်မ မေးချင်တယ် ။ “မြန်မာနိုင်ငံကို တကယ်တိုးတက်စေချင်တာလား ။ လူတတ်ကြီးလုပ်ဖို့ အားသန်နေတာလား ။ သူများကို လက်ညိုးထောက်ဖို့ ဒါတွေလှုပ်၇ှားနေတာလား”
ကျွန်မက တာဝန်ခံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပေမယ့် လူတွေက ကျွန်မကိုပဲ သိကြတော့ မေးကြတယ်။ ကျွန်မ ရှင်းပြတယ်။ ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်သူတွေချည်းပါပဲ .. ။ ဒါပေမယ့် အချို့ကတော့ သိပ်မိုက်ရိုင်းကြတယ်။
လမ်းလျှောက်ပွဲအတွက် လာသူတွေအားလုံးကို ကျွန်မ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားမိပါတယ်။ ကျွန်မ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်မမိတ်ဆွေများကိုတော့ အများကြီးဆောရီးပါပဲရှင် .. ။ အတ္တတွေနဲ့ ကျွန်မကို လာတိုက်ခိုက်သူတွေကိုတော့ အော့နှလုံးတကယ်နာပါတယ်။ နာမည်ရဖို့ သွားနေတာလား ၊ ငါလုပ်ပြီး သူများကျ မလုပ်ဘူးဆိုပြီး ပြိုင်နေတာလား ။ ပြိုင်ရအောင် ဒါ ပြိုင်ပွဲမှ မဟုတ်တာ ။
အယူအဆတွေအဲလိုမကွဲချင်လို့ ၊ စကားမများချင်လို့ သည်းခံခဲ့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်နာပါတယ်။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:40 AM3comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:40 AM0comments Links to this post
၂၄ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက စင်္ကာပူ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ မြန်မာလူငယ်အချို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ပုံတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စင်္ကာပူေ၇ာက်မြန်မာလူငယ်ကျောင်းသားများက မြန်မာပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ဝင်များကို ထောက်ခံအားပေးတာကြောင့် ယခုလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ တကယ်တော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဥပဒေအရ ဆန္ဒပြခွင့်မရှိပါဘူး .. ။ လူ၅ယောက်ထက်လဲ ပိုပြီးစုလို့ မရပါဘူး .. ။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာသံရုံးက ရဲကိုခေါ်ပြီး အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာ ရဲတွေရောက်လာပါတယ်။ အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်းပြီး ဆန္ဒပြခွင့်မရှိကြောင်းနဲ့ မြန်မာလူငယ်များကို အတင်းပြန်နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ရသလိုအနေအထားကြားက ရသလိုလုပ်ဆောင်သွားတဲ့ စင်္ကာပူရောက်မြန်မာကျောင်းသားများကို လေးစားမိပါတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာ ဒီမှာ သိပ်အန္တရာယ်များပါတယ် .. ။
ဒါက မြန်မာသံရုံးကိုဝင်တဲ့ လမ်းအ၀င်ဝပုံပါ
ရဲကားတွေရောက်လာပြီး အခြေအနေကို လာစစ်ဆေးချိန်
လမ်းအ၀င်ဝမှာ ရဲအချို့ စောင့်ကြည့်နေပြီး အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ကာ လာရောက်သော မြန်မာများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းနေခြင်းများ
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:01 AM0comments Links to this post
၁။ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုနှင့် ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀န်းများ၊ ၄င်းတို့၏ ခါးပိုက်ဆောင် ခေတ်ပျက်သူဌေးစာရင်းဝင် အခွင့်ထူးခံလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ပါမစ်တောင်းစားနေသူများ၊ ဘယ်သူသေသေငတေမာပြီးရော ဆိုသည့် ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသမားများမှ အပ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတစ်ရပ်လုံးသည် ယနေ့ချိန်ခါတွင်
အထွေထွေ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုအပါအ၀င် စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာအထွေထွေ ဆင်းရဲမွဲတေမှုအပေါင်းနှင့် အငတ်ဘေးကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။
၂။ ထို့ကြောင့် အငတ်ဘေးရင်ဆိုင်နေကြရသော အခြေခံလူတန်းစားအလွှာမှ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများ၊
၀န်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များသည် မိမိတို့ ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရသော လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကို အကြမ်းမဖက်သော လူထုလှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့် ရသင့်ရထိုက်သော၊ ခံစားသင့်ခံစားထိုက်သော အခွင့်အရေးများကို ငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုရန်အတွက် ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၃)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် အငတ်ဘေးလွတ်မြောက်ရေး အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမကြီးကို အောက်ပါ အစီအစဉ်များအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) နေ့လည် (၁)နာရီ တိတိတွင် လူထုလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနား စတင်ကြောင်းကြေညာခြင်း၊
(ခ ) နိုင်ငံတော်အလံအား အလေးပြုခြင်း၊
(ဂ) ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေးပြုခြင်း၊
(ဃ) ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် အသက်ပေးသွားသူများကို (၁)မိနစ် ငြိမ်သက် ဦးညွှတ်ခြင်း၊
(င) ပြည်သူ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးမှ လွမ်းရေးထက်ဝမ်းရေးခက်၊ ၀မ်းရေးထက် ပြည်ထဲရေးခက် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောခြင်း၊ (၁၅-မိနစ်)
(စ) ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာဟောင်းတစ်ဦး မှ မြန်မာနိုင်ငံ. ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရှုပ်တော်ပုံ
ဇာတ်လမ်းစုံ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောခြင်း၊ (၁၅-မိနစ်)
(ဆ) ရဟန်းတော်တစ်ပါး မှ အူမတောင့်ခြင်းနှင့်သီလစောင့်ခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောကြားခြင်း၊ (၁၀-မိနစ်)
(ဇ ) အိမ်ရှင်မတစ်ဦး၏ ကူးစက်မြန် ကုန်ဈေးနှုန်းတုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောခြင်း၊ (၁၀-မိနစ်)
(ဈ ) ကျောင်းသားလူငယ်တစ်ဦး မှ မတူညီသောမုန့်ဖိုးများ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောခြင်း၊ (၁၀-မိနစ်)
အထူးဖိတ်ကြားထားသူ (၃)ဦး. ဟောပြာချက်များ၊( မိနစ်-၂၀ စီ)၊
အခမ်းအနားကို ကမ္ဘာမကြေသီချင်း သံပြိုင်ဆို၍ ရုပ်သိမ်းမည်၊
၃။ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြမည့် ပြည်သူလူထုကြီးအနေဖြင့် အကျီင်္အဖြူရောင်များ ၀တ်ဆင်လာကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
လေးစားရပါသော (၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားရဲဘော်တို့ခင်ဗျား
ကျနော်တို့ တက်နိုင်စွမ်းရှိသလောက် လူထုပါလာအောင် လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ရဲဘော်တို့နောက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ မပျက်မကွက်ကျရောက်ပြီး လူထုကို ဟောပြောပေးဖို့ လေးစားစွာဖြင့် ပန်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 1:29 AM0comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 10:45 PM4comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:25 AM5comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:19 AM0comments Links to this post
A sone Thet Mae
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:17 AM0comments Links to this post
ဒီကဗျာလေးကို တော်တော်လေးကြိုက်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုရန်နိုင်ထွန်းရေးတဲ့ ကဗျာတော်တော်များများကို ကျွန်မ တော်တော်လေးကြိုက်နှစ်သက် ခံစားရပါတယ် .. ။ တကယ့်ပါရမီရှင်ပါပဲ။
ရှိုက်ကြီးငင်ကာ ငိုနေလိုက်တာ … ။
တံပိုးလှိုင်းတွေထတော့မယ် .. ။
သောသောညံအောင် ကြားတော့မယ် .. ။
ကိုးရက် ရှစ်လ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်က
သွေးနီတွေရဲပြန်ပြီလေ ……… ။
( ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအတွင်း သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ကျဆုံးခဲ့သည့် အာဇာနည် ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းအား ဤကဗျာဖြင့် ဂုဏ်ပြုဦးညွှတ်အပ်ပါသည်။ )
Posted by LIN LET KYAL SIN at 8:49 PM4comments Links to this post
ဒီကဗျာကို ဖတ်ရင်း ၊ စာပြန်စီနေရင်းနဲ့ ကျွန်မမျက်လုံးထဲ မျက်ရည်စတွေ ကပ်ငြိနေခဲ့မိတယ်။ အမှန်တရားကို ခံစားရသလို ၊ အာဏာရှင်ကို ပိုရွံမုန်းမိသလို ၊ ဒီကဗျာကို မျက်ရည်တွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ မခင်မမမျိုးကို လေးစားမိပါတယ်ရှင်။
စောင့်နေရှာတယ် .. ။
အိမ်ပြန်လာမယ့် အမေ ၊
စောင့်မျှော်နေကြသူများ ……… ။
( မျက်ရည်များနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ ဤကဗျာ ၊ စောင့်မျှော်နေကြသူများရဲ့ ကျိန်စာကြောင့် နအဖအစိုးရနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်ပါစေသား ။ )
Posted by LIN LET KYAL SIN at 8:40 PM2comments Links to this post
ရှစ်လ ရှစ်ရက် ရှစ်ဆယ့်ရှစ်”
အမည်မဲ့အသက်ပေးသွားသူများ .. ။
လူ့အခွင့်အရေးစစ်စစ်ရခဲ့ဖူးရဲ့လား .. ။
ဇွဲ ၊ လုံ့လ ၊ ၀ီရီယဥာဏ်တွေအားထုတ်
အနာဂတ်လူငယ်တွေ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့ .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 9:45 PM2comments Links to this post